Yini ongayibona eNepal | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 07/10/2021 17:00 | Nepal, Yini ongayibona
Nepal Yizwe elincane elingavinjelwe elise-Asia, ezwekazini laseNdiya. Kusezintabeni zeHimalaya kanti omakhelwane bayo yiChina, India neBhutan. Yebo, omakhelwane bayo bakhulu kakhulu kepha bancane, iNepal inezinhlobonhlobo zamathafa nokunotha kwamasiko okuthakazelisa kakhulu.
Namuhla, e-Actualidad Viajes, sigxila ongakubona eNepal.
2 Yini ongayibona eNepal
Yizwe elincane, elingunxande cishe Amakhilomitha-skwele angama-147.516 obuso. Singakhuluma ngezindawo ezintathu: iTerai, amagquma nezintaba, ngandlela thize amasongo amathathu emvelo anqunywe ngamabheshi emifula eminingana esezintabeni. ITerai ingumngcele neNdiya ngakho isimo sezulu lapha siyashisa futhi sinomswakama.
Amagquma, aseduze kwezintaba, anokuphakama okuguquguqukayo phakathi kwamamitha ayizinkulungwane eziyinkulungwane kuya kwezine, futhi ayindawo evundile futhi ehlala abantu ngoba iyindawo enezigodi ezicebile. EyaseKathmandu, ngokwesibonelo. Futhi ekugcineni, izintaba, okuyilapho iMount Everest nezinye eziphakeme khona ezingapheli. Kuyingxenye enqamula iChina. Phezu kwalezi zindawo ezintathu ezikhona, iqiniso ukuthi izwe liyabhaliswa izindawo ezinhlanu zesimo sezulu: isimo sezulu esipholile, esishisayo nesishisayo, amakhaza kanye ne-sub-arctic.
Kuze kube yiminyaka yama-90s izwe lalingumbuso wobukhosi ngokuphelele okwathi kamuva kwaba ubukhosi basePhalamende. Ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX nangemva kwemibhikisho eminingi ethandwayo ngo-2007 kwaqedwa ubukhosi okhethweni luka-2008 wanqoba Iqembu lamaKhomanisi laseNepal Inkantolo yeMaoist. Ngo-2015, owesifazane wawina isikhundla sobumengameli, Bidhya Devi Bhandan.
Sikhuluma ngokuthi iNepal yaba yisikhathi eside kangakanani izwe elinobukhosi ukuze siqale ngalo vakashela idolobha lobukhosi lasePatan. Lapha kunamathempeli amaningi, izikhumbuzo kanye nezindela kanye nengcebo enkulu yamasiko. Izakhiwo ziyamangalisa futhi isakhiwo sesigodlo sikhulu kakhulu. Kufanele uthathe isikhumbuzi futhi ngalo mqondo izikhumbuzo zensimbi nezokhuni noma imidwebo yeThangka mikhulu.
IDurbar Square iyindawo yokuthatha izithombe eziyinkulungwane futhi ingenye yezintathu zalesi sitayela esigodini saseKathmandu. Uzobona ifulethi lezitini elibomvu elihle kunazo zonke emhlabeni, ngokwesibonelo. Nali ithempeli laseKrishna.
AmaHimalayakusobala ukuthi zibalwa ohlwini. Ukubukwa kwalezi zintaba ezinhle kuyamangalisa, ngokwesibonelo, lowo osuka eNagarkot, ngamamitha ayizinkulungwane ezimbili ukuphakama. Le ntaba ingeyesibili ephakeme kakhulu ngaphakathi kwesiGodi saseKathmandu futhi ukubuka kungelinye lamakhadikhadi athandwa kakhulu, uma I-Mount Everest…
Ekhuluma nge-Everest, uma ungafuni noma ungakwazi ukuyikhuphuka, ungaba nombono omuhle emoyeni. Bangu izindiza zabavakashi ihora elihlinzeka ngombono omuhle futhi eliqinisekile ukuthi ngeke lilibaleke.
Isifunda sase-Annapurna sihle kakhulu. Ukuhamba ngezinyawo kungaqashwa kusuka ePokhara kuya kule ndawo okuyipharadesi langempela. I- izindlela zokuhamba izintaba bawela amadolobhana amahle, izindawo ezingcwele zokuhambela, amahlathi kaphayini namachibi asezintabeni acwebile. Uhambo olunconywe kakhulu yi- Isifunda se-Annapurna, ngamasimu awo, noma iGhorepani Poon Hill Trail, ngokwesibonelo. Lezi zindlela zinobunzima obuhlukahlukene, ngakho-ke uma ukuhamba akuyona into yakho ungahlala ubhalisela i- ukuhamba nge-rafting ngokusebenzisa ama-rapids noma uhambe nge-paragliding.
Pokhara yona iyindawo enhle yokuhlangana, enhle kakhulu, futhi ukusuka lapho enye inketho ukuya kufayela le- Iphuzu leSarangkot Scenic futhi ujabulele ukuphuma kwelanga. Pokhara isukela ekhulwini leshumi nesikhombisa, lapho kwakuyiphuzu emzileni wezohwebo phakathi kweNdiya neChina, ngakho-ke nanamuhla ngenxa yale ndawo, ngenxa yomlando wayo nokudla kwayo okumnandi, kuseyindawo ethandwayo.
Ngokwengxenye yayo I-Bhaktapur inikeza ukubukwa okuhle kwama-Himalaya, kepha kukhona nama-pagodas namathempeli okufanele uvakashelwe. Ama-pagodas agcinwe kahle kakhulu futhi izigodlo namathempeli kufanele ukuvakashelwa. Idolobha linamasiko kakhulu futhi liyagubha imikhosi eminingi yenkolo.
Uma uthanda ukudoba, ukubhukuda noma ukuhamba ngesikebhe kukhona Ichibi lasePhewa, ichibi lamanzi ahlanzekile lapho kuhlala khona kunezikebhe ezinemibala eziqashiswayo, ibhodi yokuhamba enhle nemigoqo eminingi emincane. Kuphakathi kokuthi uhamba ogwini lolwandle, noma uphuza ubhiya noma umane uthande imvelo nobuciko obuhle beNepalese obuhlobisa konke.
UDhulikhel ungamamitha ayi-1550 wobude ngakho-ke umoya ohlanzekile nokuthula kuqinisekiswa. Yidolobha elidala, elinemigwaqo emincane eboshwe ngamatshe enezindlu zendabuko ezineminyango namawindi anemibala. Futhi kukhona ubuwula namathempeli okubonwa nokuthwetshulwa.
El I-Chitwan National Park, endaweni yaseTerai, emngceleni weNdiya, kungenye indawo ethandwa kakhulu izivakashi. Kunezilwane eziningi zasendle, kubandakanya obhejane, izinkawu nezinhlwathi, futhi kungumhlaba wabantu bakwaChepang. Uma uthanda i-safaris lena indawo enhle kunazo zonke eNepal, noma kunezinye iziqiwi ezimbili ezinikela into efanayo: the ISagarmatha National Park futhi i IBardiya National Park.
Futhi kuthiwani UKathmandu? Igama elidumile uma kukhona, lesi sigodi esihle inezindawo eziyisikhombisa ezimenyezelwe njengeGugu Lomhlaba ngu-UNESCO. Ngeshwa, ukuzamazama komhlaba kwango-2015 kudale umonakalo omkhulu kuleli dolobha eliyingqophamlando futhi kuthatha isikhathi ukululama, okubi kakhulu uma uthatha uhambo ngeke uluphuthe.
Enye yezinto ezikhangayo kakhulu lapha yi- I-Boudhanath stupa, umane ubizwe ngeBoudha, kepha kukhona futhi Ithempeli lasePashupathinath noma i Isikwele saseDurbar, enkabeni yedolobha, nokuyilapho kwagcotshwa khona amakhosi kwaze kwaba ngekhulu le-XNUMX. Ukusuka eKathmandu ungakwenza uhambo losuku kuze kube Ithempeli lakwaSwayambhunath, Uneminyaka engama-2500 XNUMX ubudala, enobuhle obuhle bokwakha, egqumeni eligcwele izihlahla.
Uma ukwakheka kwezwe okuningi, igquma, intaba kanye nechibi kukwenza uthande impilo elula yomzana, ungahlala ukukunikeza bheka impilo ejwayelekile yasemzaneni waseNepal. Ukucabanga ngezokuvakasha, isigodi esilungiselelwe kahle lesi yidolobhana laseNewari IBandipur, khona kanye emgwaqweni oya ePokhara. Kungumuzana ojwayelekile waseHimalaya futhi wake waba okuthunyelwe okudala emzileni ophakathi kweNdiya neTibet. Yeka indawo enhle! Izakhiwo zayo zindala, zakudala, kunamathempeli, izindawo ezingcwele nezindawo zokudlela ezinhle zesimanje ezihambisana kahle nezivakashi.
Kuze kube manje umbono wokuthi yini ongayibona eNepal, kepha ngokwemvelo akuyona ukuphela kwento. Singasho ukuthi izindawo ongazivakashela eNepal yi-Everst, iDolpo, iChitwan, ILumbini okuyilapho uBuddha azalelwa khona, Kumari, iGokyo Valley, iKopan noma iTengboche Monastery. Futhi esingakwenza kuphathelene nemisebenzi yasentabeni, ukuhamba kwamasiko nenkolo.
Ekugcineni, Kuthiwani ngeCovid 19 eNepal? Kulezi zinsuku, uma unezilinganiso ezimbili zomuthi wokugoma i-Covid 19, awuzihlukanisi, zombili izilinganiso kufanele zibe nazo okungenani izinsuku eziyi-14 ngaphambi kohambo. Uma ungenayo yomibili imijovo yokugoma, kufanele ucubungule i-visa ngaphambi kokuya eNepal bese uhlukanisa izinsuku eziyishumi ngaphambili. Kufanele futhi uhambe ne-PCR engemihle amahora angama-10 ngaphambili uma ufika ngendiza futhi kungakapheli amahora angama-72 uma ufika ngomhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » Yini ongayibona eNepal
Yini ongayibona eLa Gomera